Kpido: ihu igwe peeji | Martech Zone
Kpido: ihu akwụkwọ
Kedu otu ọsọ ọsọ saịtị si emetụta ọnụego ntụgharị Ecommerce Mobile
Wenezde, August 5, 2020 Wenezde, August 5, 2020 Douglas Karr
Anyị jikọtara usoro mmemme ma mepụta ọtụtụ ngwa ahịa azụmaahịa ahaziri iche na nke ọkaibe maka ndị ahịa e-commerce nke mere ka ụba ego ha bawanye. Ka anyị gara n'ihu na-ele ndị ọrụ na-esite na ozi-e site na ntụgharị, anyị chọpụtara ọtụtụ esemokwu na nnabata ha na ikpo okwu ha nke na-emetụta ọsọ ọsọ saịtị - na-ewute ndị ahịa ha nwere ma na-agba ọsọ agbapụ elu - ọkachasị na ekwentị mkpanaaka. Gini kpatara O gha ewe Ihe Ozo O di uto oru na ahia
Whatagraph: Mepụta Ama Ama site na nchịkọta Google
Ka anyị chee ya ihu, Google Analytics bụ ọgba aghara maka nkezi azụmahịa. Maka ndị ọkachamara na-etinye oge dị ukwuu n’elu ikpo okwu, ọ bụ ikpo okwu nyocha zuru oke ma sie ike nke anyị maara nke ọma na anyị nwere ike ịza ma belata maka iji nweta azịza nye ajụjụ ọ bụla anyị nwere. Dị ka ụlọ ọrụ, anyị abụghị ndị na-azụ ahịa azụmaahịa mana anyị nwere nsogbu na-ekesa data ahụ oge ụfọdụ. Ndị ahịa anyị - ọbụlagodi
Etu esi agbalite PPC Advertising ROAS na nkeji 5 na nchịkọta Google
Tọzdee, Septemba 17, 2015 Tọzdee, Nọvemba 5, 2015 Chris Bross
You na-eji data Google Analytics iji bulie nsonaazụ mgbasa ozi AdWords gị? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị na-efu na otu n'ime ngwaọrụ kachasị enye aka na ịntanetị! N'ezie, enwere ọtụtụ akụkọ dị maka igwu data, ị nwere ike iji akụkọ ndị a iji bulie Mgbasa Ozi PPC gị n'ofe osisi. Iji Google Analytics iji meziwanye nloghachi gị na nkwụghachi ụgwọ (ROAS) niile na-eche na, ị nwere AdWords gị,
Ọdịnaya Ahịa Ahịa
Friday, May 16, 2014 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ma ị gafee ọdọ mmiri ahụ ma ọ bụ ebe a na America, ekwetaghị m na ihe ịma aka ndị dị na ire ahịa ọdịnaya enweghị mmasị… ịmepụta atụmatụ atụpụtara nke na-amalite ọdịnaya gbara ọkpụrụkpụ metụtara ndị na-ege gị ntị n'ofe usoro na ebumnuche siri ike. Enweghị ihe nzuzo ọ bụla, ọ bụ naanị ọrụ siri ike. Dị ka ọtụtụ n'ime anyị ga-atụ anya na ihe ha chọpụtara kpughere na mmefu ego ọdịnaya ga-ebili na 2014. Mana ka itinye ego na-aba ụba, ọtụtụ ndị ahịa anaghị eme
Nchịkọta m: Nchịkọta Google maka iPhone
KISSmetrics weputara ngwa iPhone n'efu nke akpọrọ My Analytics. Ọ bụ ụzọ kachasị ọsọ iji hụ etu usoro Google Analytics gị na-eme mgbe ị na-apụ na tebụl gị. N'afọ a, ndị folks na KISSmetrics na-achọ ezigbo ngwa Google Analytics iji nyere ha aka idobe taabụ na data nke ha. Ha ahụghịkwa nke ọ bụla. Ma ngwa ngwa a na-eji agagharị agagharị dị nnọọ mma ma agaghị ekwe ka ịme atụnyere, ma ọ bụ